ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် ပထမအကြိမ် မြန်မာ-ကိုရီးယား ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲကော်မရှင်အစည်းအဝေး တက်ရောက် | Myanmar Digital News
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့် ပထမအကြိမ် မြန်မာ-ကိုရီးယား ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲကော်မရှင်အစည်းအဝေး တက်ရောက်
Sep 16,2020 |07:42 |
ပထမအကြိမ် မြန်မာ-ကိုရီးယား ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲကော်မရှင်အစည်းအဝေး (1st Meeting of Joint Commission for Trade and Industrial Cooperation) ကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲတွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ညီလာခံခန်းမမှ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသည်။
အစည်းအဝေးတွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်နှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး Mr. Sung Yunmo တို့က ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်က ယခုကဲ့သို့ နှစ်နိုင်ငံအစည်းအဝေးများ ကျင်းပခြင်းဖြင့် မြန်မာနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့အကြား စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍတို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လာမည်ဟု မိမိအနေဖြင့် အခိုင်အမာယုံကြည်ပါကြောင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး၌ စီးပွားရေး ကျဆင်းလျက်ရှိရာ မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမှတစ်ဆင့် စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းများကို ကျော်လွှားသွားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍများတွင် နီးကပ်စွာဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားလိုပါကြောင်း၊ ယနေ့ကျင်းပသော မြန်မာ-ကိုရီးယား ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးပူးတွဲကော်မရှင် အစည်းအဝေးမှတစ်ဆင့် နှစ်နိုင်ငံအစိုးရ အချင်းချင်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများအကြား ခိုင်မာသည့် ကွန်ရက်ကို တည်ထောင်ကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်သွားနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး Mr.Sung Yunmo က ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း များအပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍများစွာတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုတိုးတက်လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ Korea Desk ထူထောင်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကိုရီးယားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်မည့်အပြင် မြန်မာ့ထုတ်ကုန်များ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်လည်း အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ ကုန်သွယ်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ကဏ္ဍများတွင်သာမက အခြားကဏ္ဍများ၌ပါ ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားခြင်းဖြင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှုများ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ Joint General Trade Working Group Committee ပူးတွဲအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းမင်းက Joint General Trade Working Group Committee အစည်းအဝေးတွင် နှစ်ဘက်ဆွေးနွေးခဲ့သည့် ကိစ္စရပ်များဖြစ်သည့် နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှုရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အလားအလာရှိသောကုန်စည်များ ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ရေး၊ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာဖြေလျော့မှု အစီအမံများနှင့် Korea Desk တည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၏ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရရှိမှုများကို ရှင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးသည်။
ထို့နောက် Joint Industry Working Group Committee ပူးတွဲအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဘက်မှ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ Department of Industry Policy ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr.Hwang Soo-sung မှ Joint Industry Working Group Committee အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် အကြောင်းအရာအလိုက် (Myanmar-Korea Apparel Testing Research Institute- MKATRI) ၊ (Technology Advice and Solutions from Korea- TASK) စီမံကိန်းများ၊ မြန်မာ့အထည်အလိပ်ကဏ္ဍတွင် ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ရေး၊ စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးမှုဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများတွင် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်နှင့် MSMEs အစရှိသည့် ကိစ္စရပ်များမှ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရရှိမှုများကို ရှင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးသည်။
ယင်းနောက် Joint Energy Working Group Committee ပူးတွဲအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအားစီမံရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်မိမိခိုင်မှ Joint Energy Working Group Committee အစည်းအဝေးတွင် နှစ်ဘက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့် ဒလသဘာဝဓာတ်ငွေ့မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့် စီမံကိန်း၊ ကျောက်ဖြူ LNG လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ရေးစီမံကိန်း၊ ရွှေတောင်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်း၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ကွက်များ ရှာဖွေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ် Economic Innovation Partnership Program (EIPP)၊ KOICA နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ အစရှိသည့်ကိစ္စရပ်များမှ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရရှိမှုများအား ရှင်းလင်းတင်ပြဆွေးနွေးသည်။
ထို့နောက် နှစ်နိုင်ငံပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများက နှစ်နိုင်ငံအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို အခြေခံပြီး ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများတွင် ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြရန်၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးတို့အား ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အလေးထားဆောင်ရွက်ကြရန် ပြောကြားပြီး ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည်များကို ဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
ယခုအစည်းအဝေးသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ Mr. Moon Jae-in ၏ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးမြှင့်နိုင်စေရန်အတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲကော်မရှင် ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံအကြားခိုင်မာသည့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအရ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုပိုမိုချောမွေ့စေရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှု၊ စွမ်းအင်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာကဏ္ဍများတွင် ယခင်ထက်ပိုမို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့ကို ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြ၍ မြန်မာ-ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံစလုံးအတွက် အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပြီး အောင်မြင်သည့် အစည်းအဝေး တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျင်းပသည့် ပူးတွဲကော်မရှင် အစည်းအဝေးမတိုင်မီ သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် Joint Working Group Committee အစည်းအဝေးများကိုလည်း စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
ဒုတိယအကြိမ် မြန်မာ-ကိုရီးယား ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပူးတွဲကော်မရှင် အစည်းအဝေးအား ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဆိုးလ်မြို့တွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပသွားရန် ညှိနှိုင်းခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။